Kugadziriswa kupisa basic-nheyo yekukwirira kwemaitiro kupisa
Induction Kutya kunoitika mune chinhu chinoitiswa nemagetsi (kwete sengeti yemagineti) kana chinhu chacho chaiswa mune inosarudzika yemagineti. Kupinza kupisa kunokonzerwa neiyo hysteresis uye eddy-ikozvino kurasikirwa.
Induction Kutya ndiyo nzira yekudziya yemagetsi inoitisa chinhu (kazhinji simbi) nemagetsi emagetsi, kupisa kuburitswa mune chinhu ne eddy mafungu. Iyo induction heater ine electromagnet uye yemagetsi oscillator iyo inopfuura yakakwirira-frequency alternating ikozvino (AC) kuburikidza negetsi. Iyo inokurumidza kuchinjanisa magineti inopinda mukati mechinhu, ichiburitsa magetsi emagetsi mukati mekondakita, anonzi eddy maawa. Iwo eddy mafungu anoyerera kuburikidza nekudzivirira kwechinhu kupisa kwacho naJoule kudziya. Mu ferromagnetic (uye ferrimagnetic) zvinhu simbi, kupisa kunogona zvakare kugadzirwa nemagineti hysteresis kurasikirwa. Iyo frequency yezvino inoshandiswa zvinotsamira pahukuru hwechinhu, rudzi rwezvinhu, kusanganisa (pakati peiyo coil yebasa uye chinhu chinofanira kupiswa) uye kudzika kwekupinda
Hysteresis kurasikirwa kunowanzoitika mune magineteri zvakadai sesimbi, nickel, uye vashoma zvikuru. Kurasikirwa kweHysteresis inotaura kuti izvi zvinokonzerwa nekukanganiswa pakati pemamolekoro apo zvinhu zvakagadzirwa magnetized kutanga mune imwe nzira, uyezve mune imwe. Mamolekoro angave anoonekwa semashizha maduku anotenderera nechinongedzo chimwe nechimwe chekutungamirirwa kwemagnetic field. Shandisa (simba) rinodiwa kuti uvashandure. Simba rinoshandura rikava kupisa. Mutengo wekushandiswa kwesimba (simba) unowedzera nehuwandu huwandu hwekuchinja (huwandu).
Eddy-ikozvino kurasikirwa kunowanikwa mune chero chekuita zvinhu mune imwe nyika inoita magnetic field. Izvi zvinokonzera kutungamira, kunyange kana zvinhu zvacho zvisina chero magnetic zvinhu zvinowanzobatanidzwa nesimbi nesimbi. Mienzaniso imhangura, ndarira, aluminium, zirconium, simbi isina magnetic, uye uranium. Mavhiri eddy ndiwo magetsi emagetsi anotsoropodzwa nekushandura gadziriro mumashoko. Sezvo zita ravo rinoreva, vanoita sevari kufamba-famba vachitenderera mumasikirwo mukati mehutu hwakasimba. Eddy-ikozvino kurasikirwa kunonyanya kukosha kupfuura hysteresis kurasikirwa mukutengesa kupinza. Cherechedza kuti kupisa kwekugadzirisa zvinoshandiswa kune zvisingabatsiri, uko kusina hysteresis kurasika kunoitika.
Categories Technologies Tags mabhesiki ekudziya kwekushisa, induction heat, Induction Heating Basics, induction heating principle, induction heat theory Post navigation
Magnetic Induction Kupisa Boiler